होमआइसोलेसनमा विशेषज्ञ परामर्श चहिए ११५६ फोन गर्नू – Health Post Nepal
होमआइसोलेसनमा विशेषज्ञ परामर्श चहिए ११५६ फोन गर्नू
२०७८ जेठ ७ गते १६:२३
होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई विशेषज्ञबाट स्वास्थ्य परामर्शका लागि नेपाल चिकित्सक संघ, एनएमए र अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसलन, एएनएमएफले संयुक्त रुपमा कलसेन्टर स्थापना गरेका छन्।
दुबै संस्थाको प्रयासलाई सार्थक बनाउँन नेपाल टेलिकम र ओमादी फाउन्डेसन लगायतका संस्थाले समेत सहयोग पुर्याएका छन् ।
कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई आइपर्ने विभिन्न विशेषज्ञ सेवा टेलिफोनमार्फत् परामर्श दिने उदेश्यले कल सेन्टर स्थापना गरिएको हो ।
कल सेन्टर स्थापनका लागि एएनएमएफले सफ्टवेयर, चिकित्सक तथा परामेडिकल जनशक्तिलगायतका लागि आवश्यक झण्डै २० लाख बराबरको सहयोग गरेको एएनएमएफका अध्यक्ष डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
कलसेन्टरका लागि आवश्यक टेलिफोन नम्बर ११५६ सहित, कलजडान र कलफवार्ड सेवा नेपाल टेलिकमले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएको छ । सुरुमा तीन महिना कल सेन्टर संचालन गर्ने र आवश्यकताका आधारमा समय थपिने संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले जानकारी दिए ।
नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै अहिले १ लाखभन्दा बढी संक्रमित होमआइसोलेसनमा छन्। अस्पतालमा समेत बेड अभावका कारण होमआइसोलेसनमै रहनुपर्दा समयमै जोखिमबारे सही सल्लाह नपाउँदा थुपै संक्रमितले स्वास्थ्य जटिलत एवं स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिलाई भएर ज्यान गुमाउँनु परिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा विभिन्न विधाका चिकित्सक सोसाइटीका २ सयभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सक सदस्यमार्फत् आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श दिने व्यवस्था गरिएको डा. बस्नेतले जानकारी दिए।
संक्रमितले आफूलाई परेको समस्या भनेपछि सेन्टरमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मी एवं प्राविधिकले सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञसमक्ष कल फरवार्ड गरिदिने र विशेषज्ञबाट परामर्शको व्यवस्था गरिएको डा. कार्कीले जानकारी दिए।
होमआइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई जोखिम पहिचान र अस्पताल खोजीमा सघाउँन स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत कलेसेन्टर स्थापना गरेको छ। तर, सिधै विशेषज्ञसँगै परामर्श गर्न पाउँनेगरी विशिष्ठीकृत कल सेन्टर स्थापना गरिएको भने यो पहिलो पटक हो ।
थप ४१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २० निको भए
छोरी जन्माएर बन्ध्याकरण गर्ने दम्पतीलाई करमा छुट
उपत्यकामा १२ जनामा हैजा देखियो
स्वास्थ्यमन्त्री खापुङको पहिलो निर्णय : ग्लोबल फण्डको कार्यक्रम सरकार आफैंले सञ्चालन गर्न पहल गर्ने
पेटमा अड्किएको चम्चा विना शल्यक्रिया निकाले नर्भिकका चिकित्सकले
ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले एमबीबीएस पढाउन २० लाख सहयोग गर्ने
बाँकेमा सिकलसेल एनिमियाका बिरामी बढे
काठमाडौंमा थप तीन जनामा हैजा पुष्टि, कहाँ-कहाँ देखिएकाे छ हालसम्म हैजा?